Ahoana ny famindrana ny fampahalalana avy amin'ny iPad taloha ho any amin'ny vaovao | Vaovao IPhone
Raha afaka herinandro vitsivitsy dia iray amin'ireo mpampiasa ianao nieritreritra ny hanavao ny iPad "taloha" ianao amin'ny iray amin'ireo maodely iPad Air 2 sy iPad Mini 3 vaovao (Na dia tsy mendrika ny varotra aza ity farany amin'ny tsy fitovizan'ny vidiny amin'ilay maodely teo aloha), azo antoka fa te-hamela ny iPad vaovao anao ianao hitohy satria nanamboatra ny fitaovana teo aloha ianao. Ny fametrahana ny rindranasa, ny fikirakirana ny serivisy sy ny toerana hampifanarahana azy amin'ny filantsika sy ny tsirony, dia asa mavesatra sy mahasosotra ihany, saingy misy vahaolana tena ahazoana miala amin'ny fizotra rehetra.
Soa ihany, toy ny tsy mividy Mac vaovao, mamela antsika i Apple ampitao amin'ny fitaovana hafa ny fampahalalana rehetra notahirizinay, nefa tsy mila mampiasa kopia amin'ny tanana izay ahafahantsika mamela data vitsivitsy foana eny an-dalana. Mba hanaovana izany dia mila ny fampiharana iTunes an'ny Apple isika ary hanana ny fitaovana taloha sy ny vaovao miaraka amin'ny kinova farany an'ny iOS 8, izay amin'ity tranga ity dia 8.1.
Faharoa, tsy maintsy atao izany misintona ny kinova farany an'ny iTunes amin'ny solosainantsika. Amin'ity Fizarana tranokala Apple, azontsika atao ny manamarina raha ny kinova napetraka ao amin'ny solosaintsika no farany. Na, mandeha amin'ny menio fivarotana izahay ary tsindrio ny Check raha misy fisintomana azo.
Ankehitriny dia tsy maintsy mampifandray ilay fitaovana taloha amin'ny iTunes isika manaova kopia iPad iray feno hahafahantsika mamerina azy amin'ny iPad vaovao. Mba hanaovana izany, handeha ho any amin'ny kisary iPad hita eo an-tampon'ny iTunes isika.
Hisokatra ny efijery vaovao, izay tsy maintsy hikarohantsika sy tsindrio ilay safidy Manaova kopia izao. Ny fizotrany, arakaraka ny habetsaky ny angon-drakitra notehirizinay, dia mety maharitra elaela.
Raha vantany vao vita ny fizotrany dia tsy maintsy alaintsika ny iPad vaovao ary manomboka mamita ny vaovao angatahiny mandra-pahatongantsika any amin'ny teboka izay lazainy amintsika raha te-hametraka ny iPad vaovao ho vaovao isika, raha te hamerina ny Data iTunes na na dia tianay aza ny hamerina ny angon-drakitra iCloud. Tsy maintsy misafidy ny safidy faharoa isika ary mampifandray ny fitaovantsika amin'ny iTunes ka ny fampiharana no miandraikitra ny famoahana ny fampahalalana rehetra izay nanananay tao amin'ny iPad taloha tamin'ilay vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny famindrana ny vaovao amin'ny iPad taloha ho any amin'ny iray vaovao
Miaraka amin'ny iPhone dia ho toy izany koa ny dingana?. MISAOTRA
Ireo dingana mitovy ihany.
Nahavita nandalo ny angon-drakitra nataoko aho, saingy hitako fa ny ipod pro vaovao dia mitovy ihany fa ny taloha dia tsy misy mahasamihafa ilay teo
Mamaly an'i lilian
Manana ny olana miverimberina miaraka amin'ny iPad sy iPhone aho amin'ny fotoana iray satria manana ID Apple mitovy. Inona no azo atao?